Imanyano yezothutho yaseYurophu ifuna imigangatho yokusebenza esezantsi eLufthansa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Imanyano yezothutho yaseYurophu ifuna imigangatho yokusebenza esezantsi eLufthansa
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Imanyano yezothutho yaseYurophu ifuna imigangatho yokusebenza esezantsi ngaphakathi kweQela laseLufthansa
Ngokubalulekileyo, bobabini abasebenzi kunye nabaqeshi kufuneka baphume kule ngxaki kunye, kwaye ke kufuneka sizibandakanye kwincoko yasentlalweni kwangethuba ukuze kuqinisekiswe ukwenziwa kwamagumbi amatsha ngokutyibilikayo kunye notshintsho lwazo naziphi na iinkqubo eziyimfuneko zotshintsho ngokulungileyo nangokuvulekileyo kwindawo enjalo iingxoxo.
Imibutho yabasebenzi ifuna imigangatho yokusebenza enesidima ngaphakathi kweQela laseLufthansa.
Imigangatho esezantsi yeemeko zokusebenza inyhasha amalungelo abasebenzi.
Ukhuphiswano lwangaphakathi eLufthansa lunokusonjululwa ngokunyanzeliswa kwezivumelwano ezihlangeneyo.
Ukuchaza eyona migangatho iphantsi yeemeko zokusebenza zabantu abasebenza kulo lonke iqela laseLufthansa linyathelo lokuqala lokumisa isenzo sokulahla okuqhubekayo kwenkampani yomoya yaseJamani ngokulihlazo, kodwa isazi, iyanyamezela ngaphandle kweziphathi zayo eziphambili.
Kwileta yakutshanje ibhekiswe kuSihlalo weDeutsche Lufthansa, uMnu Carsten SPOHR, the Umbutho Wabasebenzi Bezothutho baseYurophu (ETF) igxeka '' indlela esezantsi yezentlalo kunye neyabasebenzi yabasebenzi '', ethi Iqela leLufthansa Abaphathi bayaqhubeka nokwenza ngobuchule ekusebenzeni kwayo kwe-Eurowings Discover. Iqela likholelwa ukuba amanyathelo anje kuphela kwesisombululo esikhawulezileyo nesinokwenzeka sokujongana noxinzelelo lwangoku lwezoqoqosho kwintengiso, ethi yona i-ETF iyala.
Ngokwamalungu e-ETF - iKapers (Switzerland), Vida (Austria), Aircrew Alliance kunye never.di (Germany) kunye neB.United (Czech Republic) - esi sisombululo sivelisa into ebizwa ngokuba "liqela labantu langaphakathi lokutya", kwaye ixhasa umdyarho ukuya kwindlela esezantsi. Ngeli xesha imigangatho esezantsi yemeko yokusebenza ebekiweyo ukuza kuthi ga ngoku uninzi lweenqwelo moya zexabiso eliphantsi eYurophu zinyhasha kakhulu amalungelo asisiseko abasebenzi, kwaye iqela libalekela kwinkolo efanayo. Kungenxa yesi sizathu le nto umbutho wabasebenzi bezothutho wase-Yuropu kunye nababambisene nayo becela ukuba le modeli ingathathelwa ngqalelo njengeplani yamashishini amatsha, njengoko kunjalo kwi-Eurowings Discover, inkampani entsha yenqwelomoya eyaqala ukusebenza ngaphakathi kweLufthansa Group yokugqibela inyanga.
Endaweni yoko, sithathela ingqalelo ukhuphiswano lwangaphakathi kwiqela leLutfhansa elinokuthi lisonjululwe ngokunyanzeliswa kwezivumelwano ngokudibeneyo kwi-Eurowings Discover, kwaye le modeli yokunyanzeliswa iya kuthi ke iphinde iphunyezwe kuyo yonke imisebenzi yayo yaseYurophu. Imibutho yabasebenzi emele abasebenzi beQela laseLufthansa kunye ne-ETF-emele izigidi ezi-5 zabasebenzi bezothutho ngaphakathi eYurophu nangaphaya- banoluvo lokuba inyathelo lokuqala kweli cala:
ukuqala kabusha ingxoxo yasentlalweni kubo bonke abathwali apho oku kungasebenziyo, kubandakanya iEurowings Discover kunye
Ukufumana umhlaba ofanayo wokumisela imigangatho emincinci malunga neemeko zabasebenzi kumawakawaka abasebenzi beQela laseLufthansa ngoku abangenaso isivumelwano esidibeneyo.
I-Eoin Coates, iNtloko yezoPhapho kwi-ETF ithi:
'' Ngokubalulekileyo, bobabini abasebenzi kunye nabaqeshi kufuneka baphume kule ngxaki kunye, kwaye ke kufuneka sizibandakanye kwincoko yababini kwangethuba ukuze kuqinisekiswe ukwenziwa kwamagumbi amatsha ngokutyibilikayo kunye notshintsho lwazo naziphi na iinkqubo eziyimfuneko zotshintsho ngokulungileyo nangokuvulekileyo embindini. kwezi ngxoxo. ''
I-ETF kunye namalungu ayo ngaphakathi kweQela laseLufthansa ngokunyanzelekileyo bacele amaqela olawulo azo zonke iinkampani zeenqwelo-moya ezisebenza ngaphakathi kweQela laseLufthansa ukuba aqale ngokutsha ingxoxo yezentlalo kunye neemanyano zabameli ngendlela ehambelanayo, efanelekileyo nesisigxina. Oku kungangumqondiso ocacileyo wokuba iLufthansa Group ithatha amanyathelo anyanisekayo ekutshintsheni indlela engeyiyo ethathwa liqela ngokuthatha isigqibo sokuqhubela phambili imigangatho yezentlalo kunye neyabasebenzi kubasebenzi bayo kwiinkampani ezintsha.